သချိင်္ုင်းကုန်းမှ စိန်ခေါ်သံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » သချိင်္ုင်းကုန်းမှ စိန်ခေါ်သံ	22
Posted by padonmar on Apr 19, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 22 comments
နှစ်စဉ် ဇာတိမြို့လေးကို ပြန်နေကျ အတိုင်း ဒီနှစ်လည်း မတ်လ ၂၈ရက်က ပြန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၉ရက်နေ့ မနက်မှာ မိဘဘိုးဘွားတွေရဲ့ အုတ်ဂူမှာ ကန်တော့ဖို့ သချိင်္ုင်း(သို့)သုသာန် ကို တခေါက် ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အဖေနဲ့ အမေရဲ့ အုတ်ဂူကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်နေတုံးမှာ ကလေးတွေ အနားကို ၀ိုင်းလာပါတယ်။
ပန်းရောင် အကျီ်နဲ့ ကလေးမလေး တယောက်က ကျမတို့ကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီး မေးလာပါတယ်။
`အဒေါ်ကြီး၊အဒေါ်ကြီးက မနှစ်တုံးက သမီးတို့ကို စာတွေမေးသွားတာမလားဟင်´
`အင်း၊မှတ်မိတာပေါ့။သမီးတို့ကို လိပ်ပြာလေးတွေပါတဲ့ ဘောပင်လေးတွေ ပေးသွားတယ်လေ´
`ဒါဆို မနှစ်က အဲဒီ လိပ်ပြာ ဘောပင်လေးတွေ ဘာလို့ ရတာလဲ´
` စာတတ်တဲ့လူတွေရတာ၊အခု သမီး မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည် ဆိုပြလို့ရမလားဟင်´
`ဟား..ဟား၊ရတာပေါ့ ကြီးတော်ရယ်။အခု ကျုပ်တို့ ကန်တော့ရအုံးမယ်၊ပြီးတော့ကျ ဒေါ်ကြီးမေးရင် ဆိုပြနော်´
သူကလေးတွေနဲ့ အပြန်အလှန်ပြောပြီး ကိုယ့်ဆွေမျိုးတွေကို လိုက် ကန်တော့ရပါသေးတယ်။
ကိုယ့်အလှည့်ကျရင်လည်း နောက်မျိုးဆက်တွေက လာကန်တော့မှာပေါ့။
တချို့ ကလေးတွေက ကျမတို့ကို ကူကြပါတယ်။
အားလုံးပြီးတော့ သချိင်္ုင်း ဇရပ်ရှေ့မှာ ကလေးတွေကို စုလိုက်ပါတယ်။
ကလေးတွေထဲ မနှစ်က မျက်နှာလေးတွေက ကျမတို့ အကြောင်းသိနေတော့ တန်းစီကြပါတယ်။
မျက်နှာသစ်လေးတွေကတော့ အခြား သချိင်္ုင်းကန်တော့ပွဲလာတဲ့ မိသားစုတွေလိုပဲ ထင်ပြီး ကန်တော့ပြီးသား မုန့်တွေကို လက်ဖြန့်ပြီး တောင်းဖို့ ၊ တယောက်နဲ့ တယောက်လုဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။
အဲဒီ မျက်နှာသစ်ကလေးတွေကို မလုဖို့၊လူတိုင်းကို မုန့်ပေးမှာ၊တန်းမစီတဲ့လူမပေးဘူးလို့ ပြောပြီး တန်းစီခိုင်းရပါတယ်။
`သားတို့၊သမီးတို့ကို အခု ဒေါ်ကြီးတို့ စာမေးပြီးမှ မုန့်တွေကို ဝေပေးမယ်နော်။အခုလို ပေးတာ ကလေးတို့ကို သနားလို့ ပေးတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ဟုတ်လား၊ဘာဖြစ်လို့ ပေးတာလဲ ၊မနှစ်က ရဖူးတဲ့ ကလေးတွေ ပြောကြည့်ပါအုံး´
`အေးဟုတ်ပြီ၊ကဲ သားတို့ သမီးတို့ ထဲက ဘယ်သူ စာတွေ ဆိုပြမလဲ၊လက်ထောင်ပြကြပါ။´
စာဆိုပြမယ် ဆိုတဲ့ ကလေးတွေ လက်တွေ ထောင်ပြကြပါတယ်။
မနှစ်က ကျောင်းမနေသေးလို့ ဘောပင်မရဘူး ဆိုတာနဲ့ စိတ်ကောက်သွားတဲ့ သမီးလေးကို မှတ်မိကြပါသေးလား။
သူကလေးက ၂ အလီ ဆိုပြပါတယ်။သူငယ်တန်းကို သူ့အတန်းမှာ ပထမ ရပါတယ်တဲ့။
နောက်သမီးလေးတယောက်ကတော့ စောစောက မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည် ဆိုပြမယ်ဆိုတဲ့ တယောက်ပါ။
နောက်သားလေး တယောက်ကတော့ ဘုရားရှိခိုး ဆိုပြမယ်တဲ့။
အစအဆုံးမရွတ်ပါနဲ့ကွာ၊ငါးပါးသီလ အဓိပ္ပါယ်ပြောပြပါ ဆိုတော့ ဒေါက်ဒေါက်ဒေါက်ဒေါက် ရွတ်ပြသွားတာ သူများ အသက်မသတ်ရ ဆိုတာလေးတော့ ကျန်ခဲ့လို့ ရီကြရပါသေးတယ်။
၆တန်း ကျောင်းသူကြီးက မနှစ်တုံးကလည်း ပါပါတယ်။
သူက ဆုံးမစာ အရှည်ကြီးကို ရွတ်ပြသွားပါတယ်။ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်စာရော ဆိုပြပါအုံး လို့ တောင်းဆိုလိုက်တော့ My name is Bingo ဆိုတဲ့ ကဗျာလေး ပီပီသသ ရွတ်ပြသွားပါတယ်။
ဒီနှစ်တော့ ကိုကြီးရဲစည်ရဲ့ လက်ဆောင် လိပ်ပြာဘောပင်လေးတွေ မပါလို့ စာဆိုသူတွေကို မုန့်တွေပဲ ဆုအဖြစ် ပေးရပါတယ်။
စာဆိုပြနိုင်တဲ့ ကလေး ကုန်တော့မှ ကျန်တဲ့ ကလေးတွေကိုပါတန်းစီခိုင်းပြီး မုန့်တွေ ဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီထဲမှာ ၁၀နှစ်သားလောက် ကလေးကြီး တယောက်က စိတ်မထိန်းနိုင်ပဲ လုယူလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီကလေးကို အားလုံးက ၀ိုင်းပြီး အပြစ်တင်ကြတော့ ကလေးလည်း ရှက်သွားပါတယ်။
သူ့ကို နောင်ဆို လုမယူပါဘူး လို့ ၀န်ခံခိုင်းပြီးမှ မုန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မုန့်တွေ ကျန်နေသေးတော့ ကလေးတွေကို ဒီနားတ၀ိုက်မှာ အမှိုက်တွေ ပွနေတာပဲ၊ကဲ ကလေးတွေ အမှိုက်တွေ ကောက်ပြီး သုသာန်အ၀က အမှိုက်ပုံမှာ စနစ်တကျပစ်ကြမယ် လို့ ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။
ကလေးတွေ တပျော်တပါးကြီးကောက်ကြပါတယ်။ အမှိုက်ကောက်တဲ့ ကလေးတွေကို မုန့်တွေ ထပ်ပေးပြီး
ပြန်ခါနီး ကလေးတွေကို ပျော်ရဲ့လား မေးတော့ ပျော်ပါတယ် လို့ အော်ကြပါတယ်။
နောင်နှစ်ကျရင် လာရအုံးမလား။ စာတွေ ကျက်ထားမှာလား ၊ စာတွေ မေးရအုံးမှာလား ဆိုတော့
စုံနေအောင် ကြွက်ကြွက်ညံ ဖြေကြပါတယ်။
နောင်နှစ် စာမေးပွဲ အဆင့်ကောင်းကောင်းရအောင် ဖြေပြမယ် ဆိုတဲ့သူ လက်ထောင်ပါဆိုတော့ လက်ကလေးတွေ မြင့်မြင့်ထောင်ပြကြပါတယ်။
ကလေးတွေနဲ့ ကျမတို့ရဲ့ အပြန်အလှန် စိန်ခေါ်ပွဲကြီးပါပဲ။
ကိုးသင်းချိုင်းမှ စိန်ခေါ်သံတော့ မဟုတ်ရပါဘူးနော။
မနှစ်က စိတ်ကောက်တဲ့ သမီးငယ်လေး ဒီနှစ် ပထမရတယ်တဲ့၊အလီ ဆိုပြတယ်။
မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည် တဲ့။
လေးပါးသီလ ရွတ်ပြတဲ့ သား
နောင်နှစ်မှာ စာတွေ ရစေရမယ်လို့ စိန်ခေါ်သူများ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .တီဒုံတို့ ၀ါးခယ်မ သင်းချိုင်းကုန်းမှာ ကလေးနည်းသေးတယ်။ မအူပင်မှာ အများကြီးပဲ။ ကျမကတော့ ဘယ်တော့မှ လူမှုရေး၊ အလှူ ဒါန၊ စသဖြင့် လူတစ်ယောက် လုပ်သင့်တာ ဘယ်တော့မှ မလုပ်တတ်ဘူး။ တစ်ခါ တစ်ခါ ငါ လူကောင်း မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးက နှိပ်စက်တတ်တယ်။ တီဒုံတို့ကိုတော့ အားကျပါတယ်။ အနီးအနားမှာ တတ်နိုင်သလောက် ကြုံ တွေ့နေရသလောက် ပရဟိတ လုပ်ပေးတတ်တယ်။ မုဒိတာ ပွားမိပါတယ် တီဒုံရေ။
padonmar says: ပြုံးရေ
တချို့ကလေးတွေက လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ပေးသွားတဲ့ မိသားစုတွေနားပဲ ကပ်တောင်းပြီး ပြန်သွားကြရော၊
အရစ်ရှည်တဲ့ ဒို့တွေနားမကပ်ကြတာလည်း ရှိမှာ။
အမှန်တော့ အချိန်ကလေးပဲ ပိုပေးလိုက်ရတာပါ။
မုန့်တွေက မိဘဘိုးဘွားကန်တော့ပြီးရင် ဝေပေးလိုက်တာပါပဲ။
ဒီသင်းချိုင်းက ကလေးတွေကို အချိန် နာရီဝက် ၁နာရီပေးတာ ၃နှစ်ဖြစ်ပြီ။
သူတို့ဟာ သူများပေးစာကမ်းစာ စားနေတာမဟုတ်၊သူတို့ အရည်အချင်းရှိရင် ရထိုက်တဲ့ ဆုရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေး နည်းနည်းစီ ၀င်ဝင်လာကြမယ်ဆိုရင် အချိန်လှူရကျိုးနပ်ပါပြီ။
ပြုံးဆို ပိုတောင် လုပ်ပေးနိုင်မှာပါ။
naywoon ni says: မြင်​နိုင်​ပါတယ်​ဗျာ ယပ်​​တောင်​​လေးငပ်​လို့ ငိုဟန်​​ဆောင်​သူ​တွေမနဲပါလားးးးးးး ကိုယ့်​အလှည့်​ပြန်​​ရောက်​​တော့ ဘယ်​သူ​တွေ ဒီလို ငိုဟန်​​ဆောင်​မလဲ
အဲ့ဒါဝင်​​ပြောတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး အာတီဒုံ လိုင်းပြောင်းသွားပလား ထင်မိ။
မေလဆန်းလောက် အမတ်မင်း ဆီ လူကြုံ ရှိတယ်။
၂ ခု ၃ ခုလောက် ထည့်ပေးနိုင်ကောင်းရဲ့။
padonmar says: ကေဇီ့ လက်ဆောင်လေးတွေက နောက်တနေရာမှာ ပေးဖြစ်တာ.ဆက်ရေးအုံးမယ်။
Mr. MarGa says: ဒါတွေဖတ်​မိတိုင်း
padonmar says: သကြားရယ်၊
အလုပ်သွားရင်း လမ်းမှာ တွေ့တဲ့ ကလေးတွေ မုန့်ကလေးကျွေး ပီး သင်တာမျိုး လုပ်လို့ရပါတယ်။စမ်းကြည့်ပါနော်။ဒေါ်လေးက နည်းနည်းလုပ် များများပြောတတ်တဲ့သူမို့ပါ။
kotun winlatt says: ကလေး ကလေးအထင်မသေးနဲ့
ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေစကား ယူသုံးရရင် လူပင်လေးတွေ စိုက်ခဲ့တာပဲ
သာဓု သာဓု သာဓုပါဗျာ
padonmar says: ကိုထွန်းဝင်းလတ်တို့ One Candle ကစိုက်ပေးခဲ့တဲ့ လူပင်လေးတွေကိုလည်း အားကျသာဓုခေါ်လျက်ပါ။
Ma Ma says: အဖူးအပွင့်လေးတွေ မြင်ရပြီပေ့ါ။
၀မ်းသာစရာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3716
လုံမလေးမွန်မွန် says: အားကျပါတယ် တီဒုံရယ်… သူတို့လေးတွေကိုပဲ အားကိုးရမှာလေ…
Alinn Z says: .ဖြစ်မြောက်အောင် မြေတောင်မြျှောက်ပေးနိုင်သူတွေကိုပဲ အားကိုးရမှာပါ
padonmar says: အဘနီ၊ချစ်မ၊လုံမွန်၊အလက်ဆင်း
မြစပဲရိုး says: တို့ အစ်မ တော့ ၁၂ကြိုးကိုင်ပြီး ပွဲကြမ်းပြီ မှတ်တာ။
. ခေါင်းစဉ် ပေးပိုင်သကွာ။
ကလေး တွေ အတွက် စိတ်ဓာတ်အင်အားမြှင့်ပေးနိုင်တဲ့ အစ်မ ရဲ့ အစီအစဉ် ကတော့ တကယ်ဘဲ အောင်အောင်မြင်မြင် ရုပ်လုံးပေါ်လာပါပြီကော။
တစ်နိုင်ငံလုံး အတွက် မဟုတ်သေးပေမဲ့ ဒီလိုဘဲ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ကလေး တွေ ရဲ့ စိတ်မှာ ပညာ ကို တန်ဖိုးထားပြီး ချစ်တတ် တဲ့ စိတ်လေး တွေ မွေးပေးဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီလို လုပ်ပေးနေတာ အတွက်လဲ အစ်မ ကို အားကျမိပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒါဟာ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရ တာဝန်ဘဲ။
သူတို့ ရဲ့အင်အား နဲ့ သာ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ပေးနိုင်မှာ။
မဟုတ်ရင်တော့ မစို့မပို့ ရေလောင်းနေရသလိုဘဲ ဖြစ်မှာ။
လောလောဆယ် ၂၀၁၅ ထဲ ဦးစားပေး လုပ်ရမှာက တစ်နိုင်ငံလုံး တစ်ညီတစ်ညွတ် စိတ်ထားပြီး ဒီ ကလေး တွေ ကို တာဝန်ယူပေး နိုင်မဲ့ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရ ကို တင်ရမှာ။
မဟုတ်ရင်တော့ စာမေးပွဲကျ လို့ တိုက်ပေါ်က ခုန်မချ နိုင်ကြအောင် တိုက် အမြင့် တွေ ဖြိုခိုင်း နေမဲ့ အစိုးရ နဲ့ ဘဲ ဆက်ပြီး နှစ်ပါး သွားရမယ်။
မဆီမဆိုင် ပို့စ် နဲ့ လွဲကုန်ရင် စောဒီးပါ အစ်မ ရေ။
ဒီရက်ထဲ မှာ ဒီ အစိုး ရ ဆီက လုပ်နေ ပုံတွေ၊ ပြောနေပုံ တွေ က နေမြင့်လေ အရူးရင့်လေ ဖြစ်လာလို့။
kai says: အလယ်ခေတ်ဥရောပမှာ.. ချခ်ျနဲ့ဘုရင်တွဲအုပ်ချုပ်တာ.. လူထုကဘယ်လိုမှတော်လှန်လို့မရတဲအဆုံး.. အမေရိကတိုက်ကထွက်ပြေးလာကြပြီး.. တိုင်းပြည်သစ်ထောင်ကြတယ်..။
အဲဒါကြောင့်.. အမေရိကပြည်ထောင်စုထောင်တော့.. ပထမဦးဆုံး..ခြေဥကိုပြင်တဲ့ First Amendment မှာက… “Separation of church and state” (sometimes “wall of separation between church and state”) တဲ့..။
ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေး ခွဲထုတ်ပစ်တာကို.. အမေရိကရဲ့ကမ္ဘာကျော် Second Amendmentလူ့အခွင့်အရေးတွေအတွက် ဥပဒေပြုတာမလုပ်ခင်.. ရှေ့မှာ. ဦးစားပေးလုပ်ခဲ့သဗျ…။
မြန်မာပြည်ရဲ့.. အစိမ်းအ၀ါပူးတွဲအုပ်ချုပ်ဗိုလ်ကျတဲ့… စနစ်ကိုပြင်ချင်ရင်.. တိုင်းပြည်တကယ်(တကယ်)ကောင်းစားတာကိုမြင်ချင်ရင်… ဦးစားပေးလုပ်ရမှာက.. ခြေဥပြင်ရေး..
အဲဒီထဲမှာမှ..အခုလုပ်နေကြတဲ့.. ၅၉(စ)ပြင်ရေးအစား.. ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးခွဲထုတ်ပစ်တဲ့ဥပဒေပြုရမှာလို့တောင်.. ထင်နေမိ…။
အမေရိကနိုင်ငံကို တည့်တည့်ကြီး ခိုးချဖို့.. သင့်..။
ဒီလိုမလုပ်ရင်.. ဒေါ်စုလိုလူထုခေါင်းဆောင်တွေဘယ်တော့မှ.. အာဏာမရ.. ။ လူထုအပေါ်မလွှမ်းမိုးနိုင်…။
မတော်.. အာဏာရ.. အစိုးရဖြစ်လည်း.. အုပ်ချုပ်လို့မရ..။
ဦးဦးပါလေရာ says: သနားလို့ပေးတာမဟုတ်ဘူး… ဆိုတာလေးကို အရမ်းသဘောကျတယ်……
သူတို့ဘ၀ကို သူတို့ကိုယ်တိုင်မြှင့်တင်အောင် လမ်းတည့်ပေးမှာ…..
lu lu says: ကလေးတွေကိုမြင် ရ တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်သလိုလို ပီတိ ဖြစ်သလိုလို
နိုင်ငံအတွက် အရေးပါမယ့် သူတွေ ဖြစ်လာမှာပါ
ဒါနဲ့ စကား အတင်းစပ်
အန်တီဒုံ က ဘာလူမျိုးလဲ ဟင်
အောင် မိုးသူ says: အဲ့လိုကလေးတွေကို ချစ်တယ်း))
Mike says: .အာတီဒုံ ရဲ့စေတနာနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်က အောင်မြင်ပါတယ်..၀မ်းသာပါ၏ .ဒါနဲ့ အုတ်ဂူမှာ ရောင်စုံစက္ကူလေးတွေကပ်ထားတာလားဟင်..
Ma Ei says: အားပေးပါတယ် အမရေ…
manawphyulay says: တီဒုံလည်း ၀ါးခယ်မ သချိုင်္င်းမှာ စာသင်တိုက်ဖွင့်တော့မယ်ထင်တယ်။ ကောင်းပါတယ် တီဒုံရယ်။ အဲဒီက ကလေးတွေရဲ့ အပြစ်ကင်းကင်းနဲ့ စာဖတ်သံတွေကို ကြားယောင်နေမိသလိုပါပဲ။ အနာဂတ်ရဲ့ မျိုးဆက်ကောင်းများပေါ့နော်။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ကလေးတွေ ပြုံးနေကြသလို ..
ပြုံးပြုံးကြီး ဖြစ်နေမယ့် တီဒုံ ရုပ်လွှာကိုလည်း မြင်လိုက်ရပါ့ ခညာ ..
အစကတော့ ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး ..
တီဒုံတစ်ယောက် သယဲနဲ့ နပန်းလုံးဂဲ့လေသလားလို့ … ဟီး ..
ဟုတ်မှ ဟုတ်ဘဲနဲ့ …
ကလေးတွေနဲ့ စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့ … ပညာ စိန်ခေါ်သံကိုး ….